I-Queue-it: Engeza Igumbi Lokulinda Elibonakalayo Kuwebhusayithi Yakho Ukuze Ulawule Ukunyuka Kwethrafikhi Okuphezulu | Martech Zone
ULwesihlanu, February 4, 2022 ULwesihlanu, February 4, 2022 Douglas Karr
Asikwazi ukuthatha ama-oda… isayithi liphansi ngoba liya licindezelwa yizimoto.
Lawa akuwona amagama ofuna ukuwezwa uma uke waba yingxenye yokwethulwa komkhiqizo, ukuthengisa ku-inthanethi, noma ukudayisa amathikithi omcimbi… ukungakwazi ukukala ingqalasizinda yakho ngokushesha njengokufunwa kwesayithi lakho kuyinhlekelele enkulu inombolo yezizathu:
Ukukhungatheka Kwezivakashi - Ayikho into ekhungathekisa njengokushaya iphutha lombhalo kaningi kusayithi lakho. Isivakashi esikhungathekile ngokuvamile siyabhampa futhi singabuyi… okuholela ekushayeni umkhiqizo wakho futhi ulahlekelwe yimali engenayo.
Isidingo Sesevisi Yekhasimende - Izivakashi ezikhungathekile ziphumela kuma-imeyili athukuthele nezingcingo, zikhokhisa intela ithimba lakho langaphakathi lenkonzo yamakhasimende.
Isidingo Sebhothi Esibi - Kukhona idlanzana labadlali ababi laphaya amathuluzi wombhalo ukusizakala ngale micimbi. Isibonelo ama-scalpers afuna ukuthenga amathikithi amaningi ekhonsathi edumile. Ama-bots angangcwaba isayithi lakho futhi asule i-inventory yakho.
Ubulungisa Bekhasimende - Uma isayithi lakho likhuphuka naphansi ngezikhathi ezithile, izivakashi zakho zokuqala zingase zingakwazi ukuguqula futhi kamuva izivakashi zingakwazi. Lokhu, futhi, kungalimaza isithunzi somkhiqizo wakho.
Kunezixazululo ezihlasimulisayo izinkampani eziningi ezizisebenzisayo ukuze zizame ukwamukela ama-surges nama-spikes esidingweni sesayithi lakho. Nokho, lezi zingabiza futhi zingakwazi ukusabela ngokushesha. Ngokufanelekile, ikhambi liwukuthi emgqeni izivakashi zakho. Okusho ukuthi, izivakashi ziqondiswa kabusha kugumbi lokulinda elibonakalayo esizeni sangaphandle kuze kube yilapho zikwazi
Liyini Igumbi Lokulinda Elibonakalayo?
Ngokunyuka kwethrafikhi ephezulu, amakhasimende afakwe kulayini angakwazi ukufinyelela iwebhusayithi yakho ngegumbi lokulinda ngendlela efanelekile, eyokuqala nokuphuma kuqala. Igumbi lokulinda elibonakalayo lihlinzeka ngolwazi oluhle lomsebenzisi, ligcina ubuqotho bomkhiqizo wakho, linciphise isivinini se-bad bots kanye nenzuzo yevolumu. Uyaqinisekisa ukuthi imikhiqizo yakho noma amathikithi aphelela ezandleni zamakhasimende nabalandeli bangempela.
I-Queue-It: Igumbi lakho lokulinda elibonakalayo
Yifake kulayini ungumthuthukisi oholayo wezinsizakalo zegumbi lokulinda ukuze alawule iwebhusayithi kanye nokwanda kwethrafikhi yohlelo lokusebenza ngokulayisha izivakashi egumbini lokulinda. Inkundla yayo ye-SaaS enamandla inika amandla amabhizinisi kanye nohulumeni emhlabeni wonke ukuthi bagcine izinhlelo zabo ku-inthanethi kanye nezivakashi zazisiwe, zithwebula ukuthengiswa okubalulekile nemisebenzi ye-inthanethi ngezinsuku zabo ezibaluleke kakhulu zebhizinisi.
Queue-it ikunikeza ukulawula iziqongo zethrafikhi eziku-inthanethi ezisongela ukuphahlazeka isayithi lakho. Ukubeka izivakashi endaweni yokuqala, egumbini lokulinda eliphuma kuqala kugcina iwebhusayithi yakho isebenza kahle kakhulu uma kubaluleke kakhulu.
Yifake kulayini iqondiswa ucwaningo lwakamuva lwesayikholoji yomugqa ukuze ugcine izivakashi zakho zisemgqeni futhi uzinikeze umuzwa omuhle. Ngokuxhumana kwesikhathi sangempela, isikhathi sokulinda esibonisiwe, izaziso ze-imeyili, amagumbi okulinda enziwe ngendlela oyifisayo, kanye nenqubo yokuphuma kuqala unikeza amakhasimende akho ukulinda okumatasa, okuchazweyo, okulinganiselwe, nokufanelekile.
Kunezindlela ezingalungile nezingenasisekelo zokubhekana nokugcwala kwabantu abaningi ku-inthanethi. Nge-Queue-it, uqinisekisa ulwazi oluhle lomsebenzisi futhi ugcina ubuqotho bomkhiqizo wakho. Amakhasimende afinyelela iwebhusayithi yakho ngendlela efanelekile, eyokuqala nokuphuma kuqala.
Ukusetshenziswa kwe-Queue-kuqinisekise ubulungisa ku-inthanethi phakathi nemikhankaso edingeka kakhulu kanye nemisebenzi yezigidigidi zabasebenzisi emhlabeni jikelele. Zama i-Queue-igumbi lokulinda elibonakalayo futhi uhlole ukuthi lingenzani kuwebhusayithi yakho egcwele kakhulu noma uhlelo lokusebenza.
Bhalisela Isivivinyo Samahhala Nge-Queue-it
Tags: ukuthengiswa kwe-inthanethiyifake kulayiniukudayiswa kwamathikithiukukhuphuka kwethrafikhiukukhuphuka kwethrafikhiulayini obonakalayoIgumbi lokulinda elibonakalayoulayini wewebhusayithiIgumbi lokulinda lewebhusayithi
I-ReferralCandy: I-Ecommerce Referral Platform Ephelele Ongayiyethula Ngamaminithi